प्रेमिकाले विवाह गर्न नमानेपछि, विवाह गर्न ल्याएको ५ लाख पैसामा प्रेमीले लगाइदिए आगो - Kavre Online
नसरूल्लागंज प्रहरीले दिएकाे जानकारी अनुसार तहसील मुख्यालयस्थित स्पन्दना स्फूर्ति फाइनान्स कम्पनीमा प्राइवेट फाइनान्स गरिन्छ । भ्रष्टचारकाे अाराेपमा पक्राउ परेका युवकले उक्त कम्पनीमा कैशियरकाे काम गर्दै अाएका थिए । ती युवककाे नाम जितेन्द्र सिंह भएकाे बताइएकाे छ । उनी चाैकडी तहसील खिरकिया जिल्ला हरदाका हुन् । जानकारी अनुसार कैशियरका साथमै दफ्तरकाे चाबी पनि राखिएकाे थियाे । राति राजेन्द्रले कम्पनीकाे तिजाेरीबाट ६ लाख ७४ हजार रूपैँया निकालेर फरार भएकाे स्थानीय प्रहरीले अधिकारीले बताएकाे समाचारमा उल्लेख छ ।
कैशियर गायब भएपछि कम्पनीका म्यानेजरले नसरूल्लाहगंज प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । साेही उजुरीका अाधारमा प्रहरीले जितेन्द्रका बिरूद्ध ६ लाख ७४ हजार राशीकाे भ्रष्टचार गरेकाे अाराेपमा अनुसन्धान थालेकाे थियाे । सूचनाका अाधारमा प्रहरीकाे एक टाेली कन्नाैदकाे बेरावल गाउँमा पुगेकाे थियाे । जहाँबाट कैशियर जितेन्द्रलार्इ गिरफ्तार गरी साेधपुछ गरेपछि घटना बाहिरिएकाे हाे ।
प्रहरी बयानमा उनले बताए अनुसार भ्रष्टचार गरेकाे उक्त रकम प्रेमिकालार्इ देखाउन गाउँबेरावल गएका थिए । यसकापछाडि उनकाे उदेश्य थियाे प्रेमिका उसँग विवाह गर्न तयार हाेस् । तर दुर्भाग्य प्रेमिकाकाे विवाह अन्तै तय भइसकेकाेले इन्कार गरिदिइन् । प्रेमिकाले इन्कार गरेपछि निराश भएका कैशियर जितेन्द्रले अाफूसँग भएकाे ५ लाख रूपैयामा अागाे लगाइदिए । प्रहरीले उनकाे साथबाट ४६ हजार नगद पनि बरामद गरेकाे छ । प्रहरीले अाधा जलेकाे नाेट पनि जफत गरेकाे छ ।
Prevसबैले हेर्नुस् रविलाई सिध्याउन गुण्डा कसले पठायो ? | यस्तो घिनलाग्दो खेल
Nextभाईरल भएकी कमला घिमिरेलाई एक्कासी के भयो ? गीत गाउन नसकेर रुन लागिन् (भिडियो)
नेपालमै बन्छ थोरै लगानिमा यस्तो आकर्षक घर,यो कम्पनी लाई जिम्मा दिनुहोस
काठमाडौं आइपुगे रवि लामिछाने, विमानस्थलमा पञ्चेबाजसहित भव्य स्वागत (भिडियोसहित)